Wiil 50 maalmood ku dhowaad Hargaysa ugu xiran inuu cabey ”SHAAH BULUUG AH” + Talo ku socota maamulka & shacabka | Hadalsame Media
Home Maqaallada Wiil 50 maalmood ku dhowaad Hargaysa ugu xiran inuu cabey ”SHAAH BULUUG...
Wiil 50 maalmood ku dhowaad Hargaysa ugu xiran inuu cabey ”SHAAH BULUUG AH” + Talo ku socota maamulka & shacabka
(Hadalsame) 17 Okt 2020 – Wiil dhallinyaro ah oo la yiraahdo Bilaal Bulshaawi ayaa haatan cishadii 46-aad ku qaadanaya xabsi ku yaalla magaalada Hargaysa ee Maamulka Somaliland oo sheegta inuu Somalia uga go’ayo ”cadaalad darro” darteed.
Wiilkan yar ee Bilaal oo 20-jir ah ayaa u xiran in ku shaahay koob uu ka muuqdo calanka Somalia, waloow aanay jirin maxkamad lasoo taagay iyo kiis dembi ah oo waafaqsan xeer dhigan oo sheegaya sida ay taasi dembi u tahay oo ilaa haatan lasoo bandhigay.
Waxaa kale oo arrintan kusii hoos jirta cadaalad darro kale oo ah inaan la xirin qofkii lahaa makhaayadda shaaha khidmaysay iyo qofkii lahaa toona maadaama uu eedda sidoo kale leeyahay, haddiiba ay eedi jirto, qofka sameeyey, balse xabsiga la dhigay wiilkan oo Muqdisho ka yimid.
Waxaa horay halkaa ugu xirnaa milkiilaha hilinka Astaan TV oo sida la sheegay lagu haysto hantida uu isagu shakhsiyan u leeyahay, waxaa kasii horreeyey nin malaayiin kala cararay magaalada Muqdisho oo hantidii uu dadka ka dhacay ula baxsaday dhanka Somaliland, iyadoo weliba madaxda maamulka qaarkood lagu tuhmayo inay hoosaasinayaan oo ay iyagu raalli ka noqdeen falkaas oo ay qarintiisa ka qayb galeen.
MAXAA U EG SHACABKA? Sideeba khalad wuuu dhacaa, balse marka uu sidan oo kale u noqdo joogto waxaa loo baahan yahay inay shacabka iyo waxgaradku ka dhiidhiyaan, taasoo aan ilaa haatan muuqanin.
Waxaa arrintan kasii daran, in shacabka ka aragti dhiibanaya meelaha lagaga hadlayo arrintani ay qaar badan oo ka tirsani ay si indha la’aan ah iskaga taageerayaan dulmigan xitaa iyaga shacabka ah berri ku dhici kara, maadaama aanu nidaam kali talis ihi cidna u turin.
Nasiib xumo, waxa shacabka sidaa u diyaariyey oo nacaybka aan marar badan sababta cad lahayn isu gelinaya waa isla ragga sidii dhilqihii dhiiggooda u dhuuqaya, taasoo u baahan baraarug bulsho oo aad u dhaama midka aadka u baaba’san, waayo dhibkii aad gurigaaga ku daawataa isla adiga ayuu meel kale kugu qabsan karaa.
Qof reer koonfur ah laga yeeli maayo inuu u qiil dayo ama taageero in qof reer woqooyi ah oo koonfurta u shaqo iyo nolol raadsadey la iska xirto, sidaa si la mid ah inay wacyigooda sare u qaadaan ayaa looga fadhiyaa kuwa woqooyiga.
TALO KU SOCOTA MAAMULKA – Waxaan marar badan aragnaa nidaamka oo dad ku xiraya maro buluug ah ayay xirteen, sariir bay ku gogladeen, hadda oo ay taagan shaah buluug ah ayuu cabey, waxaa ku xigta cirka ayuu eegay, waxaas oo dhami waa wax lagu qoslo oo aan waxba ku kordhinaynin qadiyadda Somaliland.
Garannay inay nimanka maamulku xukumaa sheegaaan inay go’itaan doonayaan, waloow aanu shacabku taa isku wada raacsanayn, balse xitaa haddii aad go’itaan doonayso cidina garan mayso sababta in midab buluug ah lala diriraa ay daruuri ugu tahay, waayo calankani sidaa ku libdhi maayo oo dal baa sidan doona xitaa haddii ay Somaliland go’do.
Dowladi waa middii la madal timaada dood madiqi ah oo kasoo maaxatey maskax miir qabta, tani se uma muuqato mid xitaa in yar laga fikirey e bal hallagu laabto miiska kaartada.
Waxaa dheer, in shacabka ka yimi koonfurta oo la colaadiyaa ay kaliya dilayso sumcadda maamulka iyo dadka woqooyiga, balse aysan iyaduna waxba u taraynin doodda Somaliland oo ah inay cadaalad darro la kulmeen iyo inay go’ayaan toona, waayo shacabka koonfurtu eed kuma laha wixii uu nidaam, ay xitaa woqooyigu qayb kasta uga jireen, uu sameeyey.
Previous articleFALANQAYN: Hannaanka dimuqraaddigu muxuu ku wanaagsan yahay?
Next articleCiidanka Azerbaijan oo soo ridey dayuurad Armenian ah (Hal degmo & 7 tuulo oo ay qabsadeen)